विभिन्न Bitcoin कार्ड बारेमा थाहा पाउँदा को महत्व
के डेबिट कार्ड Bitcoin छन्?
Bitcoin कार्डहरू आफ्नो नियमित बैंक कार्ड समान छन् भन्ने कार्डहरू छन्. पनि Bitcoin डेबिट कार्ड भनिन्छ, यी कार्डहरू प्रयोगकर्ता सक्षम यूरो रूपमा फिएट मुद्राहरू रूपान्तरित छन् लेनदेन बनाउन, डलर र पाउन्ड. यी कार्डहरू तपाईं Bitcoin टोकन सिक्का संग Recharge अनुमति. कारोबार गर्दा पनि BTC नियमित मुद्राहरू गर्न त परिवर्तित छ. BTC वा यसको फिएट बराबर या त coinsare मा क्रेडिट. यी कम्पनीहरु को उदाहरण CoinsBank समावेश, Cryptopay.me, Spectrocoin वा Xapo.
विभिन्न Bitcoin कार्ड तुलना अन्वेषण.
पहिले छलफल रूपमा, तपाईं व्यापारीहरु Bitcoin देखि Bitcoin डेबिट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. Wirex र Xapo तपाईं आफ्नो वेभसाइटमा सिधै Bitcoin किन्न मौकाको. अन्य कम्पनीहरु यहाँ उल्लेख छैन, जबकि, तपाईं यसलाई तेस्रो पार्टी किन्न आवश्यक हुनेछ.
तीन भन्दा प्रयोग फिएट बोर्ड मार्फत प्रयोग मुद्राहरू अमेरिकी डलर हो, महान् ब्रिटिश पाउण्ड र युरोपेली यूरो. जबकि अन्य व्यापारीहरु कारोबार फारम रूपमा Bitcoin वा रूसी फिएट मुद्रा प्रयोग. फिएट मुद्रा को विकल्प स्थान मा निर्भर गर्दछ.
एक हात मा प्लास्टिक कार्ड रूपमा यसको ठोस रूप मा आउन डेबिट कार्ड, र अर्को उदाहरणका मा, तिनीहरूले भर्चुअल वास्तविकता रूपमा देखा, यस फारममा, तपाईं कार्ड धान्न सक्दैन, तर तिनीहरूले अवस्थित पक्का हो. र तिनीहरूले तरिका तपाईं मिल्दो whichever मात्र तपाईं पहुँच र यो खर्च गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न आफ्नो पहिचान व्यक्तिगत छन्. मात्र अनलाइन यी भर्चुअल कार्ड उपलब्ध छन्.
विभिन्न Bitcoin कार्ड थाह महत्त्व
लागि ग्राहकहरु कारण एक नम्बर लागि विभिन्न Bitcoin कार्ड थाहा महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूले निम्न समावेश:
भर्चुअल र रियल: केही Bitcoin टोकन भर्चुअल वास्तविकता हो. यो द्वारा, यो कार्ड मात्र अनलाइन अवस्थित अर्थ. र एक लागि यसलाई प्रयोग गर्न, यस्तो व्यक्तिगत भन्दा यो उद्देश्य लागि अनलाइन जाने. विभिन्न Bitcoin कार्ड थाह तपाईं योजना र राम्रो निर्णय र अगाडी योजना मद्दत गर्छ. त्यहाँ जानकारीको एक उपयोगी स्रोत यस सन्दर्भमा छ कि एक साइट हो:http://bitcoincardcomparison.com/. यसको मेनु विकल्प बीच तपाईं भर्चुअल वा प्लास्टिक विकल्प उपलब्ध सिकाउने छ.
यो पनि तपाईं आफ्नो स्थान र टोकन आधारमा फिएट मुद्रा विकल्प उपलब्ध देखाउँछ.
मूल्य निर्धारण: विभिन्न Bitcoin कार्ड थाह मूल्य निर्धारण लागि महत्त्वपूर्ण छ. प्रत्येक BTC यसको मूल्य कुनै वस्तुको मूल्य साथ. यो हरेक कारोबार मा व्यय शुल्क समावेश, फिएट मुद्रा मा आफ्नो Bitcoin को मूल्य, र पनि मर्मतसम्भार को लागत. एउटा पृष्ठभूमि जाँच भइरहेको तपाईं चाहनुहुन्छ के मा थप सचेत निर्णय गर्न मद्दत गर्छ.
बोर्ड मार्फत सान्दर्भिक जानकारी: bitcoincardcomparison.com तपाईं Bitcoin कार्ड प्रदायक सबै प्रकार मार्फत चाहिन्छ भनेर मात्र मंच तपाईं अत्यावश्यक जानकारी दिन्छ कि छ. र थाह यो मात्र निर्णय गर्न मद्दत गर्छ, यो पनि समय बचाउँछ र उठ्न सक्छ आश्चर्य समाप्त.
Bitcoin कार्ड Bitcoin cryptocurrency कारोबार बनाउने एक उपयोगी तरिका हो र bitcoincardcomparison.com, बारेमा Bitcoin डेबिट कार्ड उपयोगी जानकारी को लागि आफ्नो एक-स्टप केन्द्र हो.